Plastic tsindrona iray Stop hamolavola sy Manufacturing Service
Image Box lahatsoratra
CBPMM manaraka ny fenitra iraisam-pirenena, ary manana kalitao ny ISO 9001: 2005 fanamarinana izay manoro ny kalitao fanomezan-toky.
Tsy manolotra vokatra samihafa ho an'ny mpanjifa izay ahitana plastika tsindrona koronosy, fiara koronosy, bobongolo fanaovana plastika, tavoahangy Cap koronosy, elektronika fanaovana bobongolo, die nanarato, fitaovana an-trano bobongolo, bobongolo fanaovana fitsaboana, sy ny sodina fanaovana bobongolo.
Mampiasa ny farany sy ny fanjakana-of-the-kanto fitaovana sy ny dingana famokarana mba ho azo antoka ny vokatra tsara indrindra ho an'ny mpanjifa sarobidy. CBPMM afaka mpanamboatra ny vokatra fa ny fihaonana manokana ny mpanjifa sy ny fepetra takiana afaka mahazo izany haingana natolotra ho azy ireo.
Isika dia mirehareha ny amin'izay ny tena mahafeno fepetra, nofanina, sy mpiasa mahomby. Capacitated isika hihaona amin'ny quotas ao anatin'ny 24 ora, ary dia afaka manome ny santionany ny plastika lasitra ho an'ny mpanjifa ao anatin'ny 3-5 andro.
Ny ekipa ny matihanina amin'ny CBPMM dia tena voaofana sy manana fahaiza ampy mba hahatakatra ny fitsipiky ny mpanjifa eo amin'ny sehatry ny plastika tsindrona koronosy haka azy namonjy ao anatin'ny tapa-bolana.
Ny mpanjifa dia afaka miantehitra amin'ny miavaka mpiasa hitsena ny namboarina mba ao anatin'ny fe-potoana voalazan'ny.
Koa isika hahatakatra ny fifaninanana ary ny vola sensitiveness ny plastika sy bobongolo orinasa orinasa mpamokatra entana vokatr'izany, dia vidiny ny vokatra competitively. Mino isika amin'ny fanomezana faran'izay tsara ho an'ny mpanjifa ny vokatra amin'ny vidiny antonony mba hanorina sy hikolokolo fifandraisana maharitra aminy. Varotra fotsiny dia tsy manan-danja ny tanjontsika, fa tsy mifantoka amin'ny fanomezana avy hatrany sy manaiky ny mpanjifa.
CBPMM dia hanao izay hifehezana mpanjifa fahafaham-po izay hanampy antsika hihazona sy hitombo ny mpanjifa fototra.
Automotive Parts hamolavola
Medical Part hamolavola
Sodina mety tsara hamolavola
Tavoahangy Cap koronosy
TOKATRANO ENTIN koronosy
Motorcycle Parts koronosy
Nahoana no Mifidiana Us?
Ny bobongolo plastika orinasa orinasa mpamokatra entana vidiny tena saro-pady. Pricing no tena determinant ho fiantraikany ny fividianana ny mpanjifa fanapahan-kevitra. Takatsika ireo orinasa fihetsehana sy ny herin'ny Pricing ary dia toy izany no manome ny tsara indrindra ho an'ny mpanjifa vidiny.
Ataontsika ho azy ireo tany am-boalohany orinasa vidin izay mifaninana be noho ny mpifaninana. Tsy vitan'ny hoe ny vokatra tena competitively priced, fa izy ireo ihany koa ny kalitao avo dia avo. Izany dia miteraka ny tonga lafatra fitambaran'ny vokatra faran'izay tsara priced amin'ny fifaninanana tena vidiny izay manampy antsika manavaka toetrantsika amin 'ny fifaninanana.
Ny mahatonga antsika Pricing malaza eo amin'ny mpanjifa ary manampy antsika hatrany mialoha ny mpifaninana.
CBPMM mampiasa ny farany sy ny fanjakana-avy-ny-kanto sy famokarana fitaovana rafitra. Ny fitaovana maoderina nampiasaina miantoka ny hatsaran'ny vokatra. Mampiasa mandroso fitaovana toy ny haingam-pandeha nitotoana azy, dimy mpiray machining foibe, herinaratra machining marary mitsika, sy ny fikosoham-bary CNC sokitra milina, ary atsofony basy etc.
Ny farany milina sy ny tena mandroso sy famokarana mahomby rafitra mamela antsika mba hamokatra tsara vokatra amin'ny be haingana be ny vahindanitra . Ny tenantsika isika amin'ny fanomezana ny avonavona santionany plastika Lasitra ho an'ny mpanjifa tamin'ny 3-5 andro sy fihaonana ny farany fiterahana ny vokatra ao amin'ny 2 herinandro.
Ny famokarana rafitra nandroso manampy antsika hatrany mialoha ny fifaninanana ao amin'ny tena fifaninanana orinasa.
Malaza Client Base
Amin'ny maha iray amin'ireo lasitra ny tari-dalan'ny mpanamboatra plastika any Shina, CBPMM manana isan-karazany ary malaza mpanjifa fototra. Izany no natoky ny mpanjifa Shinoa, fa eran-mpanjifa.
Ny sasany dia ahitana ny hoheverina mpanjifa Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, General Motors, Ford, Audi, Volkswagen sns alalan'ny vokatra tsara ny fanatitra, fifaninanana Pricing, tena tsara-varotra taorian'ny asa fanompoana, ary ny mpanjifa-centric fomba fijery, izany no nanorenanay ny anarana sy laza ho an'ny tenantsika.
Ny mpanjifa manaiky izany ary naneho ny finoany mandrakariva ao amintsika, izay mahafa-po be ho antsika. Efa nihaona ny mpanjifa ny fepetra amin'ny fototra maharitra nandritra ny taona maro izay no mahatonga azy ireo hanao raharaham-barotra manohy miaraka aminay.
Isan-karazany ny koronosy Service
CBPMM manome maro samihafa ny plastika tsindrona bobongolo tolotra ho any amin'ny mpanjifa. Tsy manome tolotra toy ny plastika tsindrona koronosy, fiara koronosy, bobongolo fanaovana plastika, tavoahangy Cap koronosy, elektronika fanaovana bobongolo, die nanarato teny etc.
Tsy manome asa fanompoana sy mpanamboatra azo antoka tena marina sy mifanaraka amin'ny singa iray tena vidiny mirary.
Eo ambanin'ny plastika tsindrona koronosy, dia manolotra tolotra isan-karazany toy ny thermoplastic tsindrona koronosy, ny koronosy, mangatsiaka mpihazakazaka tsindrona koronosy, mafana mpihazakazaka tsindrona koronosy etc.
Za-draharaha Sales mpitantana
Mpitantana ny varotra ao amin'ny CBPMM dia tena mahay sy tsara ofana mba hahatakatra ny mpanjifa ny fepetra ka afaho ny kalitao ny vokatra, izay mihaona ny fepetra takiana.
Isika entin'ny tanjona ny fametrahana ny mpanjifa ao amin'ny fototry ny raharaham-barotra. Mpitantana ny fivarotana ireo tena nahay tamin'ny teny anglisy , ary afaka miteny misosa tsara ny mpanjifa amin'ny teny anglisy.
Izany dia manome ny mpanjifa miaraka amin'ny mora ny miresaka amin'ny fitenin-drazany aminay. Izany koa dia manampy antsika hanolo-tanana ho amin'ny mpanjifa midadasika kokoa azy ireo fototra sy ny asa fanompoana amin'ny fomba mahomby kokoa amin 'izany fiantohana fanompoana mahomby sy ara-potoana ho an'ny mpanjifa amin'ny fiteny tiany.
Lehibe Taorian'ny Service Sales
CBPMM foana ny mpanjifa-centric orinasa. Ny tanjona dia tsy mivarotra ny vokatra any amin'ny mpanjifa, fa manome tsy manan- tsahala rehefa varotra fanompoantsika azy ireo koa.
Mino isika eo amin'ny fampandrosoana sy fikarakarana ny maharitra ny fifandraisana amin 'ny mpanjifa mba hiverina any amintsika mandrakariva noho ny plastika bobongolo orinasa mpamokatra entana fepetra.
Ny taorian'ny ekipa varotra dia manome avy hatrany sy malefaka fanompoana ho an'ny mpanjifa amin'ny vokatra rehetra, na mifandray fanontaniana izay mety ho rehefa mividy ny vokatra. Miezaka isika ny hanome tanteraka sy feno rehefa avy-varotra fanompoana ho an'ny mpanjifa mba manana feno fiadanana-tsaina rehefa hividy ny vokatra.